Nwere ajụjụ E-Mail anyị [email protected]
Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ nkeonwe biko debanye aha
Jiri email gị maka nbanye
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ nkeonwe, biko banye
Jiri email gị maka ndebanye aha
Ụgbọ ibu azụmahịa (0)
Ị nwere ihe 0 n'ime ụgbọ ala gị
Global Medicals®: Onye na-ebubata ọgwụ na-ere ahịa
Ịre ahịa ọgwụ n'ogbe bụ nnukwu azụmahịa nke nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị na-ebubata ngwaahịa a ma ama na ntụkwasị obi. Enwere ọtụtụ ụdị ngwaahịa ọgwụ na-ere ahịa nke anyị na-ere ndị ahịa gburugburu ụwa gụnyere ngwaahịa nlekọta anụ ahụ, ndenye ọgwụ ọgwụ ọjọọ dị ka opioids, diapers nke a na-atụfu , ọgwụ nje na ọgwụ ndị ọzọ. Ọnụ ahịa ngwaahịa ndị a na-adịgasị iche dabere na ọnụ ọgụgụ enyere iwu, ebe mbupu na ọkwa ndị ahịa.
Anyị na-enyekwa ọrụ ndụmọdụ n'ịntanetị na-elekwasị anya na ngwaahịa na ọrụ anyị na-enye yana otu ha nwere ike isi nyere gị aka karịa. Ịzụta ngwaahịa ọgwụ n'ịntanetị site na ụlọ ahịa amaghi ama na-ebu ihe egwu n'ihi na ị naghị adịkarị n'aka maka ịdị mma ngwaahịa ị na-enweta. Ebe a na Global Medicals®, anyị na-emeso naanị ngwaahịa ọgwụ Grade A, na-enweghị nnyonye anya na ịkwa iko. Anyị na-enye ndị ahịa anyị ndụmọdụ n'efu na ndụmọdụ gbasara otu esi eme ka ndị na-ebubata ngwaahịa ahịa ka mma yana otu esi azụta n'ịntanetị iji hụ na ị nwetara ihe ị nyere n'iwu.
N'elu ngwaahịa ọgwụ dị mma dị ugbu a maka ọrịre n'ahịa ahịa na n'oke ọnụ ahịa.
Global Medicals® na-enye ndị ahịa ugbu a na ndị ga-abịa n'ihu ọrụ ndụmọdụ ahụike n'efu.
Anyị na-enye ndị ọbịa pụrụ iche nke ọrụ ahụike, nke a na-achọsi ike ma chọọ ya.
Nweta mmelite ahụike kachasị ọhụrụ yana ihe ndị ọzọ site na blọọgụ anyị, na-emesi ike na ngwaahịa na ngwa ọgwụ.
Site - Milton Ford
Kedu ka ụlọ ọrụ ọgwụ na 2021 ga-esi meghachi omume na teknụzụ ọhụrụ?
Na 2021 ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ ga-abụ ebe dị nnọọ iche ka ọ dị ugbu a. Olee otú nwere
Otu esi azụta n'ụlọ ahịa ọgwụ dị n'obodo
Ọ baghị uru ebe i bi na United States, ọ bụ n'ihe niile gbasara omume ka ị ga-enwe otu
Uru nke Ọgwụ Opioid
Ọ nwere ike na-anwa gị ma ọ bụ onye ị hụrụ n'anya ịdepụta opioids maka ọgwụgwọ mgbu na-adịghị ala ala. Ma
Nweta mmelite kachasị ọhụrụ na ngwaahịa ọgwụ anyị, azụmaahịa n'ogbe na ego mgbe ị debanyere aha.
Global Medicals® bụ onye ndu zuru ụwa ọnụ n'ịre na nkesa nke ngwaahịa ọgwụ, akụrụngwa ọgwụ na ọrụ ahụike.
Ndị na-aṅụ sịga
Ntụle ntụkwasị obi
Nwebiisinka © 2021 Global Medicals®. Ikike niile echekwabara.